आँखादान भनेको के हो ? आँखाको नानी कसरी प्रत्यारोपण गरिन्छ ? (भिडियो सहित) | Hamro Doctor News
बिहीवार, १० माघ २०७५ /
आँखादान भनेको के हो ? आँखाको नानी कसरी प्रत्यारोपण गरिन्छ ? (भिडियो सहित)
आँखा शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अंग मध्येको एक हो । यसलाई स्वस्थ राख्न सँधैभरी सचेत रहनुपर्छ । आँखालाई स्वस्थ राख्न सक्यो भने मृत्युपछि पनि आँखाले पुनः काम गर्न सक्छ । यसको लागि आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । आँखाको नानी प्रत्यारोपण भनेको के हो ? नानी प्रत्यारोपण कसरी गरिन्छ ? आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर भाइराजा श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी:
Last modified on 2017-06-19 17:20:38
चिकित्सा शिक्षा विधेयक स्वास्थानी कथा जस्तो: योगेश भट्टराई
काठमाडौं, ९ माघ । नेकपाका सांसद एवं संसदकाे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेस...
केसीको समर्थनमा देशका ठाउँ ठाउँमा जुलुस, माइतिघरमा नेबिसंघको प्रदर्शन
काठमाडौं, ९ माघ । १६ औं चरणको आमरण अनशनमा रहेका शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा.डा....
‘भ्रूण’को आनुवांशिक विकार पहिचानः जसले रोक्छ भविष्यको जोखिम
काठमाडौं, ९ माघ। गर्भावस्थामै शिशुहरुको वंशाणुगत गुण पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दा...
उपप्रधानमन्त्री यादव भन्छन् : केसीसँग भएको सम्झौता पालना गर्नुपर्छ
काठमाडौं, ९ माघ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले केसिसँग भएका सम्झौता...
माग पुरा नभएको भन्दै आक्रोशित एचएले सरकारसँग वार्ता नगर्ने (भिडियो सहित)
डा. भगवान कोइराला भन्छन्ः उपत्यका बाहिरको सन्दर्भमा डा. केसी लचिलो हुनुपर्छ
सेक्सको समय पुरुषलाई राम्रो लाग्छ यी ५ कुरा...
यसकारण बग्छ महिलामा सेतो पानी